Vidio ny antibiotika tsy misy preskripsi $ 3 ambany [tsindry iray monja]
Hitantsika 5 vokatra azo omena anao
Ny antibiotika dia natomboka tamin'ny taona 1940. Aretina maro, toy ny pnemonia, tioberkilaozy, aretin-tsofina ary ny hafa, no voafehy tamin'ny fampiasana antibiotika. Ny antibiotika dia mamono bakteria isan-karazany nefa tsy manimba ireo sela mampiantrano.
Betsaka ny karazana antibiotika. Samy hafa amin'ny fampiasany sy ny fomba fanatanterahana ny tanjony izy ireo. Ny antibiotika dia fitaovam-piadiana biolojika ankehitriny hiadiana amin'ny bakteria, holatra ary zavamananaina kely hafa misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Ny antibiotika voalohany dia hita tamin'ny taonjato faha-20. Noho izany, ny zavatra niainantsika tamin'ny antibiotika dia mbola eo amin'ny dingana misimisy ihany. Izy ireo dia fitaovam-piadiana manafika bakteria amin'ny fomba maro samihafa. Ny antibiotika sasany dia manimba ny bakteria avy ao anaty amin'ny alàlan'ny fanakorontanana ireo fizotrany anatiny manokana. Ny sasany kosa mampiasa hery mahery vaika hamonoana bakteria. Ireo karazany roa ireo dia mety hahomby amin'ny bakteria.
Iza amin'ireo karazana antibiotika misy ireo?
Any no ahitanao karazana antibiotika maro. Miorina amin'ny tanjon'izy ireo sy ny lazany ary ny fampiasa iraisana izy ireo. Ity lisitra ity dia tsy feno mihitsy. Karazana antibiotika vaovao tsy dia lehibe loatra no hita isan'andro.
Ny antibiotika Aminoglycoside dia mampiato ny bakteria sasany miiba amin'ny gram mba hamokarana proteinina. Izy ireo dia azo atelina na entina amin'ny tsindrona. Tsara kokoa raha atelinao ireny satria manana fotoana ampy hanitsiana azy ireo ny vatanao. Ny bakteria dia mety hiteraka fanoherana ny aminoglycosides.
Matetika izy ireo dia miteraka fanehoan-kevitra mahazaka kely sy tsy fahita firy raha ampitahaina amin'ny antibiotika hafa toy ny cephalosporins sy penicillins. Ny tsara indrindra amin'ny fitsaboana ny taovam-pananahana, ny lalan-drà amin'ny gastrointestinal ary ny aretin'ny taovam-pisefoana. Ny fiatraikany mahazatra indrindra dia ny fahasosoran'ny vavony.
Ny cephalosporins dia mizara telo. Toy ny eo amin'ny sehatry ny solosaina. Ny taranaka tsirairay dia mahatalanjona kokoa amin'ny fitsaboana bakteria, mifandraika amin'ny penicilins. Ny tena fampiasan'izy ireo dia ny fitsaboana ny pnemonia, ny bronchitis, ny karazana aretina amin'ny hoditra, ny tenda ary ny staph.
Fluoroquinolones dia antibiotika ankapobeny. Miasa amin'ny famongorana karazana bakteria maro izy ireo. Indraindray izy ireo dia mamokatra voka-dratsy toy ny vavony malahelo, fivalanana, mandoa ary maloiloy. Ny voka-dratsin'izy ireo matetika dia vetivety sy malefaka, manakana ny bakteria hihamaro amin'ny fanelingelenana ny fahafahan'ny bakteria mamokatra ADN.
Ity no antibiotika voalohany indrindra. Tsy nahy tamin'i Alexander Fleming izany. Izy ireo dia mitsabo karazana aretina isan-karazany toy ny taovam-pisefoana, aretin-nify, hoditra sy sofina ary mamaky ny rindrin'ny bakteria. Vokatr'izany dia novonoina ireo bakteria.
Antibiotika ankapobeny koa izy ireo. Miasa amin'ny karazana bakteria maro izy ireo. Tamin'ny faramparan'ny taona 40 tany ho any no nahitana azy ireo. Ny sasany amin'ireo fampiasan'izy ireo mahazatra indrindra dia ny: mony, tazo misy pentina, aretin'ny lalan-dra, typhus, aretina azo avy amin'ny firaisana ary maro hafa.
Aiza no hividianako antibiotika?
Ny laharam-pahamehan'ny fivarotantsika dia ny hahazoana antoka fa mpanjifa an'arivony maro no mahazo fanafody iraisam-pirenena manana kalitao tsara indrindra. Eo amin'ity fivarotam-panafody ity dia afaka mividy antibiotika an-tserasera amin'ny fotoana rehetra itiavanao azy ianao ary alao antoka fa homena antibiotika tsara indrindra novokarin'ny mpamokatra manana fahazoan-dàlana manana fifehezana kalitao faran'izay henjana ianao. Ny ekipanay matihanina dia hanao izay hahazoana antoka fa ny fitsidihanao ity farmasia ity dia azo antoka, mahafinaritra ary tena manararaotra, satria azonao atao ny mividy antibiotika mora vidy amin'ny vola takiana.
Afaka mividy antibiotika an-tserasera ve aho?
Mino izahay fa afaka manapa-kevitra samirery ny mpanjifanay raha te hividy antibiotika an-tserasera na amin'ny fomba hafa izy ireo, ary tsy mangataka fanafody. Ho hitanao fa tena mety ny mividy antibiotika mora vidy aminay, ary ho gaga ianao amin'ny vidiny ambany atolotray. Ny antony ahafahantsika manolotra vidiny ambany dia ambany dia satria miasa mivantana amin'ny tena famokarana fanafody ianao, noho izany dia tsy mila mandoa vola fanampiny ianao amin'ny fivarotana zava-mahadomelina avy amin'ny orinasa iray mankany amin'ny iray hafa alohan'ny hahatongavany amin'ny farany. Ny fahafaham-pon'ny mpanjifantsika dia tena zava-dehibe aminay, ka izahay no manara-maso ny kalitaon'ny vokatra atolotra ary misokatra hatrany amin'ny hevitrao sy ny soso-kevitrao.
Ny zavatra lehibe momba ny fivarotam-panafody dia ny ahafahanao mijanona ny fikarohanao eto, satria mahazo ny serivisy rehetra notadiavinao teo amin'ny toerana iray ianao, tsy mila mandoa vola amin'ny antibiotika avo lenta takiana. Miantsena antibiotika miaraka amin'ny fivarotam-panafody misy anao, dia hanana fanafody mahomby sy fandefasana haingana indrindra ianao, ary koa antoka azo antoka momba ny tsiambaratelo ary mazava ho azy fa tohanan'ny mpanjifa mahomby. Faly foana izahay manampy anao handamina izay olana mety anananao, koa aza misalasala segondra ary mitsidika anay haka ny antibiotika anao izao!
Samy mahazo fanafody allopathic amin'ny fivarotam-panafody akaiky na vondrom-piarahamonina ianao, fa efa mba nino ve ianao fa hividy antibiotika amin'ny internet? Amin'ny ankapobeny, ny antibiotika dia ampahan'ny fanafody allopathic ary haingana dia haingana. Izany no mahatonga ny ankamaroan'ny mpitsabo manome fanafody antibiotika. Ny antibiotika dia matetika tendren'ny dokotera fotsiny satria misy vokany haingana eo amin'ny fitsaboana azy fa tsy toy ny fanafody allopathic mahazatra. Fantatray fa lafo vidy antibiotika ny vola azo avy amin'ny fivarotam-panafody eo an-toerana, ka izao no antony lehibe tokony hisafidianan'ny olona iray hividy antibiotika an-tserasera.